vBulletin Packages - MYSTERY ZILLION
July 2012 edited July 2012 in CMS
ကျွန်တော် အခုတစ်လော vBulletin ကို စမ်းကြည့်နေတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော် သိချင်တာတွေရှိတယ်။ အရင် MZ မှာ vBulletin သုံးတုန်းက Progress Bar, ( 5%, 10%, 50% ဘာညာသာဓက ) တွေနဲ့ Thanks တွေ Reputation တွေသုံးထားတာတွေ့တယ်။ MYiD မှာဆိုရင် Awards တွေပါ ထည့်ထားတာ တွေ့တယ်။ အဲ့ဒါတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်နားကနေ ဘယ်လို ရှာရမလဲ သိချင်လို့ပါ။ ဘယ်ဟာကို ဘယ်လို ခေါ်တယ်ဆိုတာကို မသိတာက ပိုဆိုးနေတယ်။
ဘယ်နားမှာ ဘယ်လို ရှာရ၊ လေ့လာရမလဲဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။ ကူညီကြပါအုံး။ တစ်ယောက်ထဲ တိုင်ပတ်နေလို့ပါ။
when i am in your kind of position, i usually try these.
* think of one word and do sth like "vbulletin awards"
* after that, find the next word to combine vbulletin with. see second result addons and mods sound like what you are looking for.
* if it doesnt give you what you want, try "~addon"
* second result has another one "plugin"
* then you might wanna do "~plugin -addon"
* etc... and try different combinations
i find the following quite useful as well
August 2012 Moderators
I totally forgot about this post and already solved. And thanks for your answer Ko @zawlin .
<span style="color:#F80000;">Topic Locked!</span>